Lehilahy tsy fanta-pihaviana Novonoina tamin’ny fomba feno habibiana
Lehilahy iray sahabo ho 40 taona, no hita faty tao amina toeram-panjonoana iray eny an-tsaha na labadin-dRamalagasy, 1 kilometatra miala avy eo Bealanana tampon-tanana, amin’ny lalana mankany Ambatoriha, ny talata lasa teo.
Heverina ho novonoina tamin’ny fomba feno habibiana ity lehilahy ity raha ny fizahana natao tamin’ilay razana. Tombanana ho efa telo andro ihany koa ity Rangahy ity no nisy namono, saingy tsy nisy mpahita. Efa simba tanteraka mantsy ny razana. Ny mampalahelo anefa dia tsy nisy taratasy nahafantarana ity lehilahy ity tany aminy. Tsy fantatra ihany koa izay fianakaviany ka nandrasana ao amin’ny tranom-pokonolona Bealanana ny razana.